Ukhuseleko + loMthengisi -
Ungahlala njani kude neradar yokumisa ngaphandle kokuchitha amawaka eeDola kwizibheno zokuNqunyanyiswa.
Bonke abathengisi bayazi ukuba imigaqo-nkqubo yeAmazon iya isiba nzima imihla ngemihla ngakumbi xa abathengisi besenza iDropShipping. Ukukhuselwa kwabathengisi kuya kuwanciphisa amathuba akho okwenza ukuba kungasebenzi kwaye kuya kukunika umda ngokwenza ngokukhawuleza kwimicimbi enxulumene neMpilo yeAkhawunti.
Kutheni uKhuseleko loMthengisi + kubalulekile?
Wonke umntu uyazi ukuba ukumiswa kweAmazon sisivumelwano sokwenyani. Ii-Akhawunti ezi-3 kwezi-10 azenziwa zisebenze nasemva kokungenisa iZibheno ezininzi. Ukuba iAkhawunti imisiwe, usebenzisa i- $ 1k- $ 2k ekumiseni ngakunye, kwaye kunjalo, akukho isiqinisekiso ukuba uyakwenziwa kusebenze. Ukukhuselwa kwabaThengi kuya konga ixesha lakho kunye nemali, kwaye kuya kunciphisa namathuba akho okunqunyanyiswa aye kuma-80% akhangelelwe nguwo wonke umthengisi. Ukhuseleko loMthengisi + lusebenza njengeNdlela yoBomi kubo bonke abathengisi beAmazon.
UkuNqunyanyiswa kokuNcitshiswa kwehle ngama-80%
Yonke into eyaphula imigaqo-nkqubo iya kujongana nayo ngokukhawuleza eya kuthi inciphise amathuba okunqunyanyiswa ngokuzenzekelayo
Impilo yeAkhawunti ikwimeko entle
Ukuza kuthi ga ngoku Ukuhambisa ngenqanawa kunye nokusebenza kwabathengi kuya kugcina impilo yeakhawunti ikwimeko entle
Ukuboniswa kokumiswa kwexesha elizayo
Ukuba uyanqunyanyiswa nasemva kokujongana nayo yonke imiba ngokukhawuleza. Uya ku-inshorwa ngexa lokuNqunyanyiswa kwixa elizayo.
Ngaphantsi kwe-2 Ukophulwa komgaqo-nkqubo okanye amabango e-AZ kwi-Akhawunti.
Ucoceko lwezeMpilo kwiAkhawunti
Ukuboniswa kokuNqunyanyiswa kwexesha elizayo
SUKUPHOSWA YITHUBA LOKUFUMANA
ISIHLOMELO 5% -10% ISIPHUMO
Khawuleza-Olu Nikelo lweNtengiso luya kuphela ngo:
Ngaba unombuzo malunga nesi sicwangciso? Jonga olu luhlu lungezantsi kwimibuzo yethu ebuzwa rhoqo. Ukuba umbuzo wakho awudweliswanga apha, nceda unxibelelane nathi.
Ndingabhalisa? Ukuba ndinemigqaliselo engaphezulu kwe-2 yomgaqo-nkqubo kwiakhawunti?
Ewe kuya kufuneka uhlawule ipremiyamu eyongezelelweyo kwiinyanga ezi-4 zokuqala.
Amagama eNtlawulo yaNyango eyoNgezelelweyo achazwe apha ngezantsi :
3-5 Ukwaphulwa : $49
6-10 Ukwaphulwa : $99
11-15 Ukwaphulwa : $149
16-20 Ukwaphulwa : $199
Ukuba ndiyanqunyanyiswa emva kokubhalisela isicwangciso, kuya kufuneka ndihlawule nayiphi na intlawulo?
Kufuneka nje uhlawule umrhumo wenkonzo yee-$100 kwisicwangciso sethu sokukhawulezisa (i-$849) kunye ne-$200 yesicwangciso seprimiyamu ($1299)
Kuthekani ukuba ndiyanqunyanyiswa kwinyanga enye emva kokuba ndibhalisile kwesi sicwangciso?
Kuya kufuneka ubhalise ubuncinci iinyanga ezintathu ukuze ugqunywe ngokumiswa. Ukuba uyanqunyanyiswa ngaphambi kwenyanga ezi-6 kuyakufuneka uhlawule kuphela i-6/1 yeePakeji zeeleta zeZibheno.